के अनमोलले बलिउडको टिकट काटेकै हुन् ? -
Home›मनोरञ्जन›के अनमोलले बलिउडको टिकट काटेकै हुन् ?
नायक अनमोल केसीले बलिउडमा इन्ट्री गर्न लागेको चर्चाले अहिले व्यापकता पाएको छ । उनले एक बलिउड चलचित्रमा सम्झौता गरेको भनेर ‘हमारा महानगर’ नामक भारतीय पत्रिकाले समाचार लेखेपछि चर्चा बढेको हो । अनमोल स्वयंमले फेसबुकमा ‘टिकेट टू बलिउड’ भन्दै उक्त समाचारको स्त्रिmनसट सेयर गरेका छन् ।
खासमा वर्ल्ड वाइड रेकडस् नामको भारतीय म्यूजिक कम्पनीले निर्माण गर्ने चलचित्रका लागि अनमोल अनुवन्ध भएका हुन् । सो कम्पनीका प्रमुख रत्नाकार कुमारले अनमोल र भूवन केसीसँग केही दिनअघि सम्झौता गरेका थिए । अनमोलले ‘ए मेरो हजुर ३’ र ‘ब्याचलर बन्टी’ भन्दा अगाडि नै यो फिल्म साइन गरेका हुन् ।
चलचित्रको निर्देशन भूवन केसीले गर्ने भनिएको छ । भूवनले यो बलिउड चलचित्र नै भएको बताए ।’यो बलिउड चलचित्र नै हो, जसलाई नेपाली र हिन्दी भाषामा डब गरिनेछ । चलचित्रको छायांकनको समयमा पनि कलाकारले दुबै भाषामा संवाद बोल्नेछन् । विश्वभर हामी अंग्रेजी सबटाइटल राखेर रिलिज गर्दैछौ,’ उनले भने ।
हुन त नेपालमा बलिउड चलचित्र खेल्ने भनेर भोजपुरी चलचित्र खेलेका कलाकारहरु पनि छन् । मुलधारको बलिउड फिल्ममा आफूलाई स्थापित गरेकी नेपाली कलाकार अहिलेसम्म मनिषा कोइराला मात्रै हुन् । अनमोल केसीले अभिनय गर्न लागेको चलचित्र पनि मुलधारको होइन ।
चलचित्रको नाम तय भैसकेको छैन । अनमोलले यो चलचित्रका लागि निकै महंगो रकम लिएको चर्चा छ । तर, भूवनले अहिले नै पारिश्रमिकको बारेमा केही खुलाउन चाहेनन् ।
यो चलचित्रको छायांकन फागूण १५ गतेबाट मात्र सुरु हुँदैछ । चलचित्रका लागि एक जना नायिका भारतबाट खोजिने र एक जना नेपाली चलचित्रकी नै नायिका हुनेछिन् । चलचित्रका लागि बलिउडका कलाकार ज्याकी श्राफसँग कुरा भैरहेको छ ।
चलचित्रलाई निकै महंगो बजेटमा खिचिनेछ । नेपाल र मरिससमा चलचित्रको छायांकन हुनेछ । चलचित्र पूर्ण रुपमा लभ स्टोरी कथामा बन्नेछ । चलचित्रका लागि प्राविधिक र छायांकन सामग्री भारतबाट नै ल्याइने भूवनले जानकारी दिएका छन् । यो चलचित्रलाई विश्वका ७४ वटा देशमा एकसाथ रिलिज गरिने बताइएको छ ।
अब यो योजनामा भूवन केसी र वर्ल्ड वाइड रेकडस् कत्तिको सफल होला त्यो भोलीको कुरा हो । तर, नायक अनमोलको लागि यो एउटा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो ।
बलिउड / हलिउडमनोरञ्जन
असोज १० मा ‘छ माया छपक्कै’, तर राजनीति भयो भने ?
कलाकला र संस्कृतिदेशमनोरञ्जनसंगीत
बुंगद्यः रथ यात् घटनामा परेका सबै अभियन्ता रिहा
सप्तरीमा आगलागी, ५ घर जले